Wasaaradaha Internetka - Kaniisadda Masiixa
Waayo, Rabbigu wuxuu leeyahay, Anigu waan garanayaa fikirrada aan idiinku fikiro.
Beergooyska dhab ahaantii waa mid weyn Dhiirrigeliya, waayo, Sayidku wuxuu kuugu yeedhay addoommadiisii.
Dhegayso mid ka mid ah wacdintayada
Baro Kitaabka Quduuska ah iyada oo loo marayo Koorsooyinka Baybalka
Maxaan sameeyaa si aan u badbaadiyo?
The kaniisadaha Masiixa
Waa kuwee kiniisadaha Masiixa, maxay rumaystaan?
Anagu waxaan nahay kuwo aan madax banaaneyn mana lahaan xarun dhexe ama madaxweyne. Madaxa kaniisaddu waa mid aan ahayn Ciise Masiix (Efesos 1: 22-23).
Kaniisad kasta oo ka mid ah kaniisadaha Masiixa waa madaxbannaan, waana erayga Ilaah oo naga dhigaya mid rumaysad leh (Efesos 4: 3-6). Waxaannu raacnaa waxbarista Ciise Masiix iyo Rasuulladiisa quduuska ah, oo maaha waxbarista nin. Waxaan nahay Masiixiyiin oo kaliya!
A Farriinta Rajada iyo Dhiirrigalinta
Ma waxaad tahay raadinaya cusub qoyska kaniisadda inaad barato oo aad caabuddo? Waan jeclaan lahayn ogoow intaa ka badan adiga iyo qoyskaaga. Kaniisadaha Masiixa ayaa kugu soo dhaweynaya.
Raadinta ugu dambeyntii wacdinta? Dhegayso ama soo bixi nuqul maanta. Galitaankayaga wacdinta in laga maqlo tiro ka mid ah wacdiyayaashii adduunka oo dhan.
Nagu soo biir Axaddaani cibaadada! Waxaan leenahay kumanaan congregations aduunka oo dhan si aad u raaxaysato. Booqo wicitaanada internetka si aad u hesho kaniisadda kuu dhow.
Baro About Our Church
Waxaan ku hadlaa halka ay Kitaabka Quduuska ah ku hadlaan, oo waxaan aamusnaa meesha Kitaabka Quduuska ah. Anagu waxaan nahay kuwo aan madax banaaneyn mana lahaan xarun dhexe ama madaxweyne.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan Kaniisadaha Masiixa
Madaxa kaniisaddu waa mid kale oo aan ahayn Ciise Masiix isaga (Efesos 1: 22-23).
markaad na soo booqanayso Salaadda: Inta lagu jiro adeegga cibaadada, dhowr ka mid ah ragga ayaa hoggaamin doona shirarka salaadda.
Heesidda: Waxaan heeseynaa heeso dhowr ah oo isku duuban, oo ay hoggaamiyaan hal ama dhowr madax ah. Kuwaas waxaa lagu heesayaa capella (iyada oo aan la soconin qalabka muusikada).
Cashadii Rabbiga: Waxaan ka qayb qaadanaa Cashada Rabbiga maalin kasta, ka dib qaabka kaniisaddii qarnigii koobaad.
Iyadoo ay ka badan yihiin jasiiradaha 7,000 iyo dadka sii kordhaya ee 104 million, Philippines waa waddan weyn oo istaraatiijiyadeed oo u ah Asia.
Raadi Sidee Inaad Ka Qaybqaadato
Filibiin badan ayaa ka shaqeeya Shiinaha, wadamada kale ee Aasiya, iyo xitaa wadamada bariga dhexe, halkaas oo ay leeyihiin shaqooyin saameyn leh. Doorka iyo waqtiga muhiimka ah ee loo yaqaan "Solar Player".
Kaniisadda Rabbiga waxay ku jirtay Filibiin sannado badan sababtoo ah dedaaladii hore ee hadda iyo hadda. Maanta waxaa jira qiyaasaha 800.
Kaniisadaha Masiixa ayaa kugu soo dhaweynaya inaad naga caabudo Rabbiga. Waxaan halkan u joognaa inaan Ilaah u adeegno oo kaa caawino socodkaaga Rabbiga. Booqo kaniisadda Masiixa ee beeshaada. Had iyo jeer waa farxad u adeegta qoyska Ilaah. Haddii aan kuu adeegi karno fadlan ha ka waaban inaad wacdo ama qorto.
Baro wax badan oo ku saabsan
Soo rogo Samba
Akhri Our Blog
"Kaniisada Masiixa waa dhab ahaan waxa aan qoyskayga iyo aniguba raadineynay oo aan u baahannahay. Waxaan u mahadcelinaynaa Wasaaradaha Internetka si aan ula wadaagno injiilka Masiixa annaga. Ilaah waa wanaagsan yahay! "
Our Wasaaradda Arrimaha Gudaha
Silbano Garcia, II. waxay u adeegtaa sida wacdiye u ah kaniisadaha Masiixa, waana aasaasaha wasaaradaha Internetka. Brother Garcia waxa ay ka shaqeynaysay adeeggayaga gobolada California, Colorado, Florida, Idaho, Iowa, New York, iyo Texas. Waxa uu sidoo kale ku wacdiyey shirarka injiilka ee adduunka oo dhan. Munaasabada May 1, 1995 wuxuu ahaa qalab loogu talagalay in la geliyo Internetka ugu horeeya ee kaniisadaha Masiixa ee adduunka oo idil www.church-of-Christ.org. Wasaarada online-ka ah waxay sii wadi doontaa inay u adeegto xarun internetka loogu talagalay kaniisadaha Masiixa ee adduunka.
Brother Garcia waxaa loo yaqaan 'Evangelist Internet' iyo 'Pioneer' oo ku yaala barashada internetka. Waxa uu ahaa qalab lagu caawinayo boqollaal jameeco ah isticmaalka internetka isagoo ah gaari lagu faafinayo Injiilka Ciise Masiix. Dadaallada internetka ayaa laga ogaaday dhammaan kooxaha ugu waawayn ee adduunka oo ay ku jiraan duni cilmaani ah.
Wax badan ka baro Wasaaradaha Internetka